MDC National Council yeMuna 2014 Yodaidzira Musangano weStanding Committe Yaivepo Mugore Iri
MDC president Morgan Tsvangirai and deputy Thokozani Khupe
Vaive nhengo dzeNational Council yeMDC yaitungamirirwa nemushakabvu, VaMorgan Tsvangirai, muna 2014 vakaita musangano wechimbichimbi muHarare neChina vakabuda nechisungo chekuti, National Standing Committee yebato iri yakasarudzwa pakongiresi ya2014, inofanira kukoka musangano wekuzeya mutongo weSupreme Court uyo wakapa masimba ekutungamira bato iri kune vakasarudzwa semutevedzeri waVaTsvangirai pakongiresi iyi, Dr Thokhozani Khupe, wofambiswa sei.
Vachitaura mushure memusangano wakaitwa neChina pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House, Amai Paurina Mpariwa-Gwanyanya, avo vakasarudzwa semutevedzeri wenyori mukuru webato pakongiresi ya2014, vati musangano wavo wanezuro wakaona mutongo weSupreme Court senzira yekuda kuparadza bato ravo.
Vakati vamwe vakuru vakuru vakasarudzwa pakongiresi ya 2014 vakaita saMuzvare Khupe, mutevedzeri wasachigaro, VaMorgen Komichi, pamwe nemunyori mukuru, VaDouglas Mwonzora, vaiziva nezvemutongo uyu ndosaka vakatanga kutodzinga dzimwe nhengo dzeMDC Alliance muparamende.
Vamwe vakapinda mumusangano uyu, VaJameson Timba, vakati chisungo chekukoka hutungamiriri hwese hwakasarudzwa muna 2014, zvakaitirwa kuti hutungamiri uhu huzotsanangura kuti vofamba sei sebato.
Asi VaKomichi vakaudza Studio7 kuti musangano uyu wakaitwa zviri kunze kwemutemo, uye havasi kuzotevedza zvakabuda mumusangano uyu.
Asi VaTimba vakaudza Studio7 kuti hapana chinofanira kunetsa sezvo VaKomichi nechaikwata chavo vakati vanoda kutevedza bumbiro rebato pamwe nemutemo wenyika.
Zvimwe zvisungo zvakabuda mumusangano uyu ndezveekuti VaKomichi, Muzvare Khupe naVaMwonzora, vanofanira kumbomira kumiriria vamwe vakuru vebato iri kudzamara musangano wavari kuda waitwa musi wa 6 Chikumi.
VaUrayayi Zembe vebato reDemocractic Party vanoti makakatanwa ari muMDC anokonzerwa nekuti mubato iri mawanda zvitubu. Asi vanoti musangano uyu wakakosha sezvo uine chinangwa chekuti vese vari kunetsana vagare pasi vogadzirisa zviri kunetsa.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, VaDewa Mavhinga, vanotiwo kuungana kwehutungamiriri hweMDC muHarare uyu wakakosha uye zvakakosha kuti vazeye nekuona kuti voita sei nemutongo weSupreme Court.
Dare reSupreme Court rakati makongiresi akaitwa naVaChamisa naMuzvare Khupe haina kuitwa zviri pamutemo zvichitevera kushaya kwaVaTsvangirai muna Kurumed 2018.
Dare iri rakati Muzvare Khupe, avo vakasarudzwa pakongiresi yemuna 2014 semutevedzeri wemutungamiri webato, ndivo vanofanirwa kufanobata matomu vodaidzira kongiresi inozosarudza mutungamiri mutsva.
Kana Muzvare Khupe vakatadza kudaidzira kongiresi iyi, dare rakati izvi zvinofanirwa kuitwa naVaKomichi.
Kunetsana muMDC kuri mumatare edzimhosva zvichitevera danho rakatorwa neMDC yaVaChamisa rekupikisa kudzingwa kwakaitwa nhengo ina dzebato iri muparamende neMDC yaMuzvare Khupe, iyo inoti yakatora masimba zvichitevera mutongo weSupreme Court.
Matsamba ekudzinga nhengo idzi akanyorwa naVaMwonzora, avo vakaudza Studio7 kuti vakatora danho iri mushure mekunge vaona kuti nhengo idzi dzakange dzisisaite zvido zvebato, uye mumwe wavo, VaChalton Hwende, vakanga vazivisawo paramende kuti vaida kudzinga VaMwonzora naVaKomichi.
Mutongi wedare reHigh Court, Justice Tawanda Chitapi, vari kutarisirwa kupa mutongo wavo panyaya iyi svondo rinouya.